Madaxweyne Xasan: Waxaan qaadnay tilaabo looga hortegayo cudurka Ebola – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliyeed, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay tillaabooyinka ka hortagga ah ee ay Soomaaliya qaadeyso si ay u xaqiijiso in Feyraska Xanuunka Ebola uusan saameynin Soomaaliya.
Soo ifbaxa cudurka Ebola waxa uu markii ugu horreysay ka dillaacay dalka Gini bishii Maarso 2014. Laga soo billaabo markii uu uu cudurku dillaacay, feyrasku waxa uu ku faafay dalalka Liberia iyo Sierra Leone. Dillaaca cudurkan waa kii ugu ba’naa taariikhda la hayo marka laga eego xagga xaaladaha tirada dadka ee u li’anaya.
“Aad baan uga walaacsannahay xanuunkan ka dillaacay Galbeedka Afrika. Waxa aan doonayaa in aan qalbigiinna ku dejiyo in Soomaaliya aad uga fogtahay dalalkaas ayna u dhaxeyso masaafo dheer si uu Ebola u soo gaaro Soomaaliya” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa xusay in dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika isla qaateen tilaabooyin loogu hortegayo in cudurkaasi usoo gudbo Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee dalka jooga.
“Si kastaba ha ahaatee, iyada oo og jiridda muuqata ee cudurkaas, Dowladda Federaalka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeedba waxa ay qaadeen tillaabooyin deg deg ah si Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM looga ilaaliyo cudurkaas. Tillaabooyinkaas waxaa ka mid ah kala shaqeynta AMISOM in la qaado tillaabooyinka muhiimka ah ee ka hortagga si loo xaqiijiyo in Ebola uusan soo gelin Soomaaliya isaga oo u soo maraya ciidamada la iskubedelaayo” ayuu yiri madaxweyne Xasan.
“Waan aqoonsannahay khatarta xanuunkan ba’an iyo saameynta uu ku hayo saaxiibadeenna Afrikaanka ah. Heegan baan u nahay in aan caawinno dalalka uu waxyeelleeyey cudurku waxaana u rajeneynaa waxkaqabasho iyo caafimaad deg deg ah” ayuu Madaxweynuhu yiri.
Cudurka Ebola ayaa ka dilaacay dalalka Galbeedka Afrika, siiba dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Nigeria, wuxuuna dilay da badan.
Dalka Sacuudiga ayaa sanadkaan Muslimiinta Galbeedka Afrika u diiday fiisaha ay ku aadi lahaayeen xajka iyagoo ka cabsi qaba in dadkaas Sacuudiga geeyaan cudurka halista ah ee Ebola.